Wasiirka ku xigeenka howlaha Guud ee Puntland oo la kulmay Jaaliyadda Puntland ee Norway – Radio Daljir
Oktoobar 31, 2015 4:23 b 0
Sabti, Oktoobar 31, 2015 (Daljir) —Jaaliyadda Puntland ee wadanka Norwey ayaa kulan soo dhaweyn ah u sameeyay wasiir ku xigeenka howlaha guud iyo gaadiidka dowladda Puntland Mudane Cabdiraxmaan Dijaanao oo maalmihii lasoo dhaafay safar ku marayay dalalka Yurunb.
Kulankan cashada ah ayaa waxaa kasoo qayb galay Haween, dhalinyaro, Odayaal, mamulka Jaaliyadda iyo marti sharaf kale.
Gudoomiyaha Jaaliyadda Puntland ee Dalka Norwey Cabdifutaax Cabaas ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay booqashada uu wasiir ku xigeenka howlaha guud Jaaliyadda ugu yimi, sidoo kale Cabaas ayaa ka waramay waxyaabihi u qabsoomay Jaaliyadda tan iyo markii loo doortay hoggaanka ururkan, wuxuna sheegay inay mar kasta ka go’an tahay ka shaqaynta midaynta shacabka Soomaaliyeed ee wadanka Norwey ku nool gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobaladda Puntland.
Qaar ka mid ah Odayaasha iyo haweenka Jaaliyadda xubnaha ka h ayaa soo dhaweeyay masuulkan, waxay sheegeen inay mar kasta ka shaqeeyaan horumarka iyo danaha shacabka Puntland.
Ugu danbeyntii wasiir ku xigeenka howlaka guud, gaadiid iyo guriyenta Puntland Cabdiraxmaan Dijaana ayaa marka hore ka mahad celiyay soo dhaweynta Jaaliyaddu u samaysay, waxa kale uu ka waramay xaalada dalka gaar ahaan is-badalka hormarineed ee Puntland ka jira.
Wasiir ku xigeenka ayaa Jaaliyadda ugu baaqay inay sii xoojiyaan dadaalada iyo taageerida ay dalka ka wadaan si loo gaaro isku filnaansho dal iyo dibad ah.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Sabti_31